Wasiirka Amniga: Haweeney ninkeedu horay Muqdisho ugu dhintay ayaa isku qarxisay hotel Central – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
23rd February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya, C/risaaq Cumar Maxamed ayaa ka hadlay haweeney la sheegay iney qeyb ka heyd qaraxyo Jimcihii lasoo dhaafay lala beegsaday Hotel Central ee magaalada Muqdisho ayna ku dhinteen dad ka badan 20 oo ay ku jireen xildhibaano.
Wasiirka oo wareysi siiyey VOA ayaa sheegay in haweeneydaasi ay is qarxisay ayna ka mid aheyd shaqaalaha hotelka, isagoo tilmaamay inay aheyd hooyo dhashay 6 caruur ah.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in baaritaano ay wadaan, isla markaana weerarkan loo xiray labo mas’uul oo ka mid ah mas’uuliyiinta hotelka iyo 10 kale oo ahaa Ilaaladii hotelka, kuwaasoo uu xusay in wax laga weydiinayo qaraxa ka dhacay gudaha Hotelka.
Wasiirka ayaa xusay iney maqleen in haweeneydu ka timid mid ka mid ah dalalka Yurub “Haweeneydan waxaan maqalnay inay Yurub ka timid, ninkeediina uu Xamar ku dhintay, sababo aanan ogeyn, waxay laheyd 6 caruur ah oo labo-labo mataano u ahaa” ayuu yiri wasiir C/risaaq.
Wuxuu wasiirku sheegay in haweeneydaasi aysan seexan jirin hotelka, balse ay habeen ka hor qaraxa ay seexatay hoetlka “Waligeed hotelka ma seexan, waxay seexatay markii u horeysay subixii ay qaraxyada dhacayeen habeenka ka horeeyay” ayuu yiri Wasiirka Amniga C/risaaq Maxamed Cumar.
Wasiirka oo sii hadlaya ayaa sheegay inay heeleen xog ku aadan in maalin ka hor maalintii uu qaraxu dhacay ay 6-dii caruurta ee ay dhashay ay hooyadeed u dirtay, balse aysan garanayn meesha ay hooyadu deggentahay.
Gabadha la sheegay iney is qarxisay ayaa ka shaqeyn jirtay hotelka Central, waxeyna deganeyd guri ku yaalla degmada Shibis ee gobolka Banaadir.